बिचार – MeroJilla.com
आफूभन्दा शत्रु शक्तिशाली भए के गर्ने ? Friday, March 22nd, 2019
काठमाडौं । महाभारतमा धेरै शक्तिशाली राजाहरुको वर्णन गरिएको छ । यसै बलवान् राजामध्येका एक हुन् जरासन्ध । जरासन्ध र श्रीकृष्णको बीचमा युद्ध पनि भएको थियो । सो युद्ध कृष्णले कूटनीतिको माध्यमबाट जित हासिल गरेका थिए । महाभारतका अनुसार जरासन्ध मगधका राजा थिए । यो अहिले बिहारमा पर्छ । जरासन्धले अरु राजालाइ पहाडी क्षेत्रमा बन्दी बनाएर राख्ने गर्थे । महाभारतका अनुसार भीमले..
गायत्री मन्त्रको महत्व, किन १ सय ८ पटक जप गरिन्छ ? Monday, March 4th, 2019
मन्त्र किन उच्चारण गरिन्छ ? मन्त्रको विकास किन र कसरी गरियो ? मन्त्र जप गर्नुको ध्येय के हो ? निश्चय पनि कुनै धार्मिक लाभका लागि मन्त्र जप गर्ने होइन । हाम्रो शरीर र मनसँग यसको कुनै न कुनै सम्बन्ध छ । मन्त्रको कुरा गर्दा हामी धेरैजसोले सुन्दै र सुनाउँदै आएको मन्त्र हो, गायत्री मन्त्र । कतिपय विद्यालयमा बालबालिकालाई समेत गायत्री मन्त्र सिकाउने गरिन्छ । गायत्री मन्त्र के हो ? हामी..
संस्कृति कुनै पनि राष्ट्रको परिचायक मात्र होइन, विशेषता पनि हो । वर्तमान समयमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र होइन तापनि प्रायः नेपालीहरूले वैदिक सनातन धर्मलाई अङ्गिकार गर्दै आएका छन् । यही वैदिक सनातन धर्म तथा परम्परागत सभ्यता नै हिन्दु संस्कृति हो । हिन्दु संस्कृतिको मूल आधार वेद हो भने स्मृति, पुराण, उपनिषद्हरू वैदिक सनातन धर्म तथा संस्कृतिका खम्बा हुन् । हिन्दु संस्कृतिमा..
नेविसंघको अबको दायित्व : सङ्गठन सुदृढीकरणदेखि स्ववियु निर्वाचनसम्म Thursday, February 28th, 2019
सुशान्त आचार्य : वि.सं २०२७ साल बैशाख ६ गते काठमाडौंमा स्थापना भएको नेविसंघ विपिन कोइरालादेखि नैनसिंह महरसम्म आईपुग्दा १८ अध्यक्ष प्राप्त गरिसकेको छ । नेविसंघ नैनसिंह महरको राजीनामा पश्चात् १९ औँ अध्यक्षको पर्खाईमा रहेको छ । नेविसंघको स्थापना कालदेखि हालसम्म हेर्ने हो भने जसमा ६ निर्वाचित, पाँच सर्वसम्मत र सात सभापति तदर्थ समितिबाट छानिएका छन् । नेविसंघको ईतिहासमा..
‘जीवनभर एकअर्काको साथ दिने’ कसम खाएर जोडिएका कति सम्बन्ध एउटा मोडमा आइपुगेपछि दुई चिरा पर्छ । एउटै छानोमुनी जीवन काट्ने, एउटै थालमा खाने, एउटै विच्छ्यौनामा एकाकार हुने भावनात्मक बन्धन किन टुट्न पुग्छ ? जवाफ एउटै वाक्यमा पुरा हुँदैन । श्रीमान र श्रीमतिबीचको सम्बन्धमा कटुता आउनु, भ्रम र अविश्वास बढ्नु, अन्ततः अलग-अलग हुने निर्णयमा पुग्नुमा एउटै मात्र कारक हुँदैन । यसमा..
४० वर्षमा ३५ हेलिकोप्टर दुर्घटना, ९१ को मृत्यु (सूचीसहित)
१५ फागुन, काठमाडौं । बुधबार ताप्लेजुङको फुङलिङमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित उच्चपदस्थ उड्डयन अधिकारी र वायुसेवा सञ्चालकको मृत्यु हुने गरी भएको डाइनेस्टी एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्‍यो, योसँगै नेपालमा ४० वर्षका बीचमा ३५ वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार योसहित नेपालमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ९१..
ओली असफल हुनु भनेको नेकपा असफल हुनु होेइन र ? Monday, February 4th, 2019
देवेन्द्र चुडाल - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जतिसुकै ठुला ठुला डंक पिटेपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि सरकारकै लागि सरकारमात्र भएको जस्तो देखिएको छ । ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ उद्घोष गरेका थिए आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर तर त्यो उद्घोष अहिले हल्लामात्र सावित भएको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार..
सर्च पत्रकारिता कहिलेसम्म ? कृष्णा पौडेल Thursday, January 24th, 2019
पछिल्लो समय मुलुकमा सर्च पत्रकारिता निकै मौलाएकोछ । खोज पत्रकारिता केन्द्रका कालो धन सम्बन्धी खोजमुलक सामाग्रीले ? विल्कुल होइन । सर्च र खोजको अर्थ समान तर काम अलग । नेपालको धन विदेशी बैंकमा थन्क्याउने र कालो धनलाई नेपाल भिœयाउने सम्बन्धी खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको खोज रिपोर्टको संसददेखि सडकसम्म चर्चा छ । बौद्धिकताको गच्छे अनुसार सबैले त्यसबारे..
धार्मिक हिसाबले नेपाल–भारत सम्बन्धको पाटो — विपुल कुमार Tuesday, December 18th, 2018
भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी ६ घण्टे भ्रमणका लागि विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुर आएर फर्केका छन् । प्रदेश सरकारले उनको स्वागतका लागि कुनै कसर बाँकी राखेनन् । मिथिलाको परम्पराअनुसार उनको स्वागत गरियो भने ३६ प्रकारको व्यञ्जनबाट सत्कार गरियो । मूलतः उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जनकपुर भ्रमण धार्मिक रहे पनि यसले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उजागर गर्ने मौका..
यो प्रहरीले निजि व्यवसाय पनि गरेर खान दिन्न्,संघीयताको बिरोध प्रहरीले गरेको छ – प्रमुख जलजला गाउँपालिका Friday, December 14th, 2018
पर्वत- -जलजला गाउँपालिका प्रमुख रामकृष्ण मल्ल प्रहरी प्रशासनले विनाकारण दुख दिन थालेपछि पर्वतमा संचालित क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले दैनिक आधादर्जन प्रहरी क्रसर उद्योगमा खटाएर धरपकड गर्नेगरेको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग सहश्रधाराका सह–संचालक लालबहादुर मल्लले जानाकारी दिए । ‘हरेक दिन उद्योगभित्र पसेर प्रहरीले..
इन्जिनियरका दुःख, एसोसिएसनको चुनाव र उठईनुपर्ने मुद्दाहरु Sunday, December 9th, 2018
ई. रुद्र प्रसाद अधिकारी पछिल्लो समयमा बहुसंख्यक मध्यम वर्गीय आर्थिक पृष्टभूमि भएका हजारौं विद्यार्थीको रोजाईमा परेको विषय हो इन्जिनियरिङ्ग । समाजमा प्रतिष्ठित पेशाको रुपमा लिईने इन्जिनियर बन्न एस।ई।ई। पछी डिप्लोमा ९ओभरसियर० वा प्लस टुमा विज्ञान विषय लिई उत्तीर्ण गरी विश्वविद्यालयहरुले लिने प्रवेश परिक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ अनि मात्र चार वर्षे इन्जिनियरिङ्ग..